Shaqooyinka badankoodu waxay u baahanyihiin waxbarasho aasaasi ah, haddii aad waxbarasho dugsi sare leedihidna waxay taasi kordhineysaa fursadahaaga ku aaddan in aad shaqo heshid. Taageerooyinkeenna kala duduwan waxaad fursad ugu haysataa in aad dhistid kartidaada aqoon- iyo khibradeed.
Heshiis qoraal ah oo waxbarasho
Haddii aad ka yartihid 25 sano waxaad heshiiskeenna waxbarashada ku yeelan kartaa karti aqoon-iyo khibradeed oo utbildningskontrakt. Heshiiska waxbarashadu waa heshiis u dhexeeya adiga, annaga iyo degmada aad ka tirsantihid. Waxaan wax ka dhiganeysaa waxbarashada dadka waaweyn ee degmada ama dugsi shacbi oo dad waaweyn ah.
Marka aad ka qeyb qaadaneysid etableringsprogrammet waxaa jira waxbarashooyin kala duduwan oo fara badan oo aad dhigan kartid. Tani waxay noqon kartaa tusaale ahaan:
Dugsi hoose-dhexe-ama dugsi sare oo waxbarashada dadka waaweyn ah ama dugsi shacbi ah oo dadka waaweyn ah. Waxbarashadu waxay qofka siin kartaa u ehel ahaansho aasaasi ah oo ku aaddan waxbarasho sii wadasho.
Waxbarasho diyaar-gareyn ah ka hor inta aan la billaabin waxbarashada dadka waaweyn
Waxaad haysataa fursad ah in aad heshid caawimaad waxbarashada dadka waaweyn kuugu diyaar-gareyneysa waxbarasho ah heer dugsi hoose-dhexe ama dugsi sare. Tani waxay noqon kartaa tusaale ahaan:
Etableringskurs på folkhögskola. Waxaad dhigataa swiidhish, oo mararka qaarkood lagu dhafay booqasho waxbarasho, tababar shaqo iyo dadaallo kale oo kuu diyaar-gareynaya sii wadasho waxbarasho ama shaqo.
Studiemotiverande kurs på folkhögskola. Hawlaha wax qabashada ee ku aaddan niyad u yeelidda, tababarashada farsamada wax dhigashada iyo in diiradda la saaro swiidhishka, ingiriiska, xisaabta ama cilmiga bulshadu waxaad ku noqoneysaa qof si fiican ugu diyaarsan in uu waxbarasho sii wato.
Waxbarashada xagga waxyaabaha kale ee taageerada iyo barnaamijka
Haddii aadan haysan waxbarasho dugsi hoose-dhexe- ama dugsi sare wax waad dhigan kartaa mararka qaarkood, lacagta waad ku qaadan kartaa taageerooyinkeenna iyo barnaamijadeenna kale, tusaale ahaan damaanadqaadka- shaqada iyo horuumarka. Tani waxay noqon kartaa tusaale ahaan:
Waxbarasho ku aaddan heer aasaasi ah ama dugsi sare oo lagu dhiganayo waxbarashada dadka waaweyn ama dugsi shacbi oo dad waaweyn ah. Waxbarashadu waxay qofka siin kartaa u ehel ahaansho aasaasi ah oo ku aaddan waxbarasho sii wadasho.
Waxbarashooyin xirfadeed oo gaagaaban oo ka jira waxbarashada dadka waaweyn ee degmada, oo noqon kara waddada ugu dhakhsi badan ee shaqo lagu gaarayo.
Waxbarashooyin diyaar-gareyn ah ka hor inta aan la billaabin dugsi hoose-dhexe iyo dugsi sare
Waxaad haysataa fursad ah aad isugu diyaarisid dhigashada dugsi hoose-dhexe ama dugsi sare. Tani waxay noqon kartaa tusaale ahaan:
Taageero ka imaaneysa Guddiga dhexe ee Taageerada waxbarashada (CSN)
Waxaad mararka qaarkood CSN taageero dhaqaale uga heli kartaa waxbarashooyinka heerarka dugsiga hoose-dhexe- iyo dugsiga sare. Waxay taasi ku khuseysaa haddii aad wax ka dhiganeysid waxbarashada dadka waaweyn ee degmada ama haddii aad waxbarasho u dhiganta ka dhigatid dugsi shacbi ah oo dadka waaweyn.
Haddii aad u baahantihid in aad dhigatid waxbarasho dugsi sare oo buuxda waxaad mararka qaarkood xaq u leedahay taageero waxbarasho billaabid.
Haddii aad u baahantihid in aad dhigatid waxbarasho dugsi sare oo buuxda waxaad mararka qaarkood xaq u leedahay taageero waxbarasho oo inta kale ka sarreysa oo ka socota CSN. Waxay taasi tusaale ahaan ku khuseysaa haddii aad:
ku jirtid utbildningskontrakt
tihid 20-24 sano jir aadna ka qeyb qaadatid jobbgarantin för ungdomar ama jobb- och utvecklingsgarantin
tihid 25 sano jir ama ka weyntihid
Wax dheeraad ah oo ku aaddan sida ay wax u dhacayaan waxaad ka akhrisan kartaa bogga intarneetka ee Guddiga Dhexe ee Taageerada waxbarashada (CSN).